JADE: SIDA LOO SAMEEYO TAAJKII GEEDKII - SOOSAARKA DALAGGA
Tijaabi taajka geedkii
Jadeecada ama geedku waa geedka aan la qabin ee daryeelka, wuxuu leeyahay caabaq aan caadi ahayn kulaylka, qabow, la'aanta qoyaan, wuxuu ku kori karaa qolalka leh qadar yar oo iftiin ah.
Maaddaama ay fududahay iyo muuqaal cajiib ah, warshadani waxay heshay sumcaddii weyn ee beeralayda dhirta. Si kastaba ha noqotee, dad badan ma oga in qaabka quruxda badan ee geedku uu yahay natiijada nadaafad gaar ah.
Maqaalkani, waxaan baran doonaa sida loo abuuro taajka ah geed lacag ah dheri guriga, iyo nooca daryeelka uu weli u baahan yahay.
Ma u baahanahay?
Mulkiilayaasha badan ee geedaha lacagta ayaa soo jeedinaya in aysan u baahnayn nidaamyo ku saabsan samaynta taaj qurux badan iyo jir weyn, in muuqaalka noocan ah uu ka yimid dabiiciga.
Laakiin dhab ahaantii, guriga, haweenada dufanka leh ee aad u liita, waxay koraan dhaadheer iyo dhuuban, iyo laamuhu ma haystaan ​​wakhti ay ku sameeyaan barkin adag ka hor inta aan la samayn caleemo qaro weyn. Tani waxay keenaysaa xaqiiqda ah in geedku uu bilaabmayo inuu leexiyo, mararka qaarkoodna wuxuu ku dhacaa nus.
Si looga hortago dhacdooyinka noocan oo kale ah, taajkii geedku wuxuu u baahan yahay qaabab gaar ah oo si madaxbanaan loo fulin karo.
Ma taqaanaa? Waxaa la rumeysan yahay in si lacag loogu helo guriga, waxaa lagama maarmaan ah in la aaso lacagta la isku qurxiyo ee ugu sarreeya dheriga dheriga, iyo koritaanka dhirta, hantida ayaa kordhi doonta.
Sidee loo sameeyaa taaj
Si geedo lacag ah loo qaato qaab geed, waxaa lagama maarmaan ah in la sameeyo labo habraac oo aasaasi ah - manjooyin iyo qanjaruufo. Waxaa lagama maarmaan ah in la sameeyo habraaca noocan oo kale ah marka geedku uu weli yar yahay.
Gooyadu waa inay ahaataa oo keliya geedo waaweyn oo si weyn u baxda. Waxaad u baahan tahay inaad jarto sidan oo kale oo ku saabsan afar caleemood oo ku yaal laanta. Nidaamka waa in lagu sameeyaa mindi ama sharooto.
U hubso inaad hubiso in qalabku yahay mid nadiif ah, gooyana waa in lagu daaweeyaa ash qoryaha ama kaarbiidh firfircoon, haddii kale waxaad halis u tahay dhirta geedka.
Sidoo kale waxaa caan ka ah dhirta sida Tolstyankov oo ah da 'yar (dhagax), aihrizone, kalanchoe, sedum (nadiifin), echeveria.
Si aan loo gooyo laanta geedkii geedka, guriga ayaad si sahal ah u fulin kartaa nidaamkan oo kale. Ka dib muuqaalka laanta saddex ama afar jajab ee caleemaha, kelyaha, kaas oo soo bixi doona kan xigta, waxaad u baahan doontaa inaad si tartiib ah ugu soo jiido cambeeri ama farahaaga.
Waxaa habboon in tan la sameeyo dhaqdhaqaaqa wareegsan, maadaama aad curyaan ka soo baxdo dhalada. Qaar ka mid ah burooyinkeeda cusub waa inay ka muuqdaan goobta ay ku xoqeen maalmo yar, taas oo ah calaamad muujinaysa in geedka uu bilaabo laanta.
Xaalado dhif ah, hal kalyo ayaa u muuqda, laakiin haddii ay taasi dhacdo, hababka waa in lagu celiyo.
Waa muhiim! Si loo jaro caleemaha ka soo baxa jirridda cawska dufanka leh, muhiim maaha, waxay u baahan yihiin geedka koritaanka, mustaqbalkana way iska baabi'i doonaan.
Noocyada daryeelka ee dabka
Inkastoo dhirta iyo daryeelka aan qabin, horumarka ugu wanaagsan waxaa lagama maarmaan ah in la ilaaliyo heerkulka ugu fiican, doorto iftiinka saxda ah, ku dhaji nidaamka biyaha, bacriminta iyo muddada dib loo soo celiyo.
Maarso ilaa Sebtembar Heerkulka ugu fiican ee geedku waa inuu noqdaa qiyaastii 24 ° C, xagaaga waxaa lagula talinayaa in lagu beero geedka balakoonka. Sebtembar ilaa Febraayo waa qiyaastii 14 ° C.
Haddii xilliga jiilaalka heerkulku ka sareeyo waa inay noqotaa, ka dibna waxay daadin kartaa caleemaha, laakiin waa inaadan walwal gelin, marka ay koraan.
Sida iftiiminta, meelo dhalaalaya oo qorraxdu si toos ah ugu haboon tahay podanka, xilliga qaboobaha, waxay u baahan yihiin iftiin dheeraad ah. Geedka waxaa laga heli karaa penumbra, laakiin tayadaas waa in aan lagu xadgudbin, maaddaama uu sii dheeraado hoyga ayaa sababi kara jirro ama dhimasho.
Jiilaalka ka dib, dhirta waa in si tartiib tartiib ah u caadaystaan ​​inay si toos ah ugudbiyaan si ay uga fogaadaan gubashada.
Ma taqaanaa? Kuwo badan ayaa aaminsan in wejigu uu nadiifinayo hawada wasakhda ah iyo qalab dabiici ah oo dabaq ah.
Waraabiyo dhirta xagaaga waa in ay ahaato mid baaxad leh, laakiin inta u dhaxeysa waraabinta dhulka waa in la qalajiyaa. Xilliga dayrta iyo xilliga qaboobaha, waxaad u baahan tahay inaad wax yar cabto, seddex maalmoodba mar ka dib marka qalalan la qalajiyey. Waraabinta xad dhaafka ah, taasoo keenta biyaha joogtada ah, waxay keeni kartaa in la gooyo ee xididada, taas oo ay adag tahay in lagu daaweeyo.
Wakhti ahaan waxaa lagula talinayaa in lagu buufiyo dhirta biyo kala gooni ah iyo boodhka ka saar boogaha.
Bacriminta our warshad waa lagama maarmaan inta lagu jiro xilli firfircoon, taas oo ku dhici guga iyo xagaaga. Bacriminta Complex leh qadar yar oo nitrogen ah ayaa loo isticmaalaa dharka ugu sareeya.
Waa muhiim! Sidoo kale, si sax ah u sameynta taajka dheriga waa inuu ahaataa hal warshad, haddii kale dhididku si dhow ayuu udhici doonaa, dadaalkaaga oo dhan wuxuu hoos u dhigi doonaa godka.
Si ninkani dufankiisu si fiican ugu kobciyo guriga, waxay u baahan tahay in dib loo soo celiyo, laakiin marka hore waxay u baahan tahay inay hesho dheriga saxda ah. Haddii dhirta lagu dhex beeray dherigii weynaa, markaas waxay gaari doontaa, taas oo markaa ka dhigaysa mid khafiif ah oo daciif ah.
Dheriga saxda ah waa in laga sameeyaa dhoobo, ma qoto dheer, iyo ballaadhku waa inuusan ka badnayn dhexroorka taajkii geedka. Tusaale ahaan waxa dheriga loo baahan yahay geedkii lacagta, waxaad arki kartaa sawirka.
Qalitaanka isku midka ah ayaa la sameeyaa markii loo baahdo marka dheriga uu noqdo mid adag. Sida ciidda, isku darka soo socda ayaa sameyn doona: 4 qaybood oo cammuud ah, 1 qayb oo humus caleen, 1 qaybood oo ah sod.
Isku darka aad diyaarisid waa inuusan noqon mid nafaqo leh, haddii kale laamuhu waxay bilaabi doonaan inay si dhaqso ah u koraan oo ay ku tiirsanaadaan miisaankooda, taas oo ka dhigaysa dufanka muuqda mid aan muuqaal lahayn. Sidaa darteed, si aan u dhicin geedka, waxaa ugu wanaagsan in la iibsado substrate gaar ah dukaanka ubaxa.
Waxaa laga yaabaa in aad xiiseyneyso inaad wax badan ka barato dhirta gudaha sida chlorophytum, chrysanthemum, hibiscus, violet, spathiphyllum, beerja, cyclamen, anthurium, liin, geranium, aloe.
Joogitaanka biyaha wanaagsan ayaa sidoo kale loo tixgeliyaa inay tahay xaalad muhiim ah, lebbiska, dhagaxyada ama baaritaanka dhexdhexaadka ah ayaa ku haboon ujeedadaas.
Geedka lacagtu waa geed gaaban.taas oo dad badani caan ku noqotay. Waa wax aan qabin dareenka, laakiin weli way ka fiican tahay in la raaco talooyinka qaarkood ee daryeelka. Waxyaabaha muhiimka ah ee sameynta "sawir" ee sawirka "puff" waa waqtigaa oo jilicsan, xoqin iyo dherer habboon.